Varotra fisoratana anarana sy fisoratana anarana amin'ny patanty any Shina - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Mba hiarovana bebe kokoa ny marikao sy ny zon'ny mpamorona vokatra, ny ekipa orinasa Fumax dia afaka manampy anao amin'ny fanarahana dingana lehibe:
1. Soraty ao China ny marika varotrao.
2. Ampiharo ny patanty sinoa amin'ny anaranao.
Ny ekipa Fumax dia afaka manara-maso tsy an-kijanona raha toa ka mifanipaka amin'ny antoko hafa ny marika varotrao na ny patantinao. Hanome anao tatitra tsy tapaka.
Ahoana ny fomba fanaovana fisoratana anarana ara-barotra any Shina?
Mora izany fa tsy mora. Ny mari-pamantarana dia marika iray izay manome ny tanjona manokana sy lehibe hamantarana ny entana na serivisy ana mpamokatra, izay ahafahan'ny mpanjifa manavaka ny entana na serivisy ana mpamokatra iray amin'ny iray hafa.
Fantatry ny rehetra fa ny fanatontoloana dia mifamatotra mafy amin'ny sehatra samihafa, ho an'ny fifandraisana, fitsangatsanganana eran-tany, fampivelarana orinasa. Mampiharihary ny tenanay amin'ny fotoana fohy amin'ny Internet izahay, mitovy amin'ny ataon'ireo vokatra na serivisinay. Ny fiarovana ny marikao na ny marika dia tena zava-dehibe, tsy amin'ny tsenanao eo an-toerana ihany, fa koa manerantany. Manana andraikitra lehibe amin'ny toekarena manerantany i Shina miaraka amin'ny tsenany hugh. Izany no antony ilanao mari-pamantarana mari-pamantarana any Shina dieny izao.
Sina dia firenena manana rakitra voalohany. Midika izany fa ilay olona misoratra anarana amin'ny marika famantarana voalohany, izay hahazo ny zony rehetra hizara sy hivarotra vokatra any Shina.
Ahoana ny fomba fangatahana patanty any Shina?
Ho an'ny vahiny, orinasa vahiny ary fikambanana vahiny hafa misy fonenana maharitra na birao voasoratra ao Shina, dia afaka mankafy ny fitsaboana mitovy amin'ny olom-pirenena sinoa momba ny fangatahana patanty sy fiarovana ny patanty.
Ho an'ny vahiny, orinasa vahiny ary fikambanana vahiny hafa tsy misy fonenana mahazatra na birao voasoratra ao Shina, dia mety hangataka patanty ihany koa izy ireo saingy tsy maintsy mahafeno ny iray amin'ireto fepetra telo manaraka ireto:
1. Nifarana ny fifanarahana teo amin'ny firenena misy ny mpangataka sy i Shina.
2. Fifanarahana iraisam-pirenena izay iarahan'ny firenena roa tonta.
3. Sina sy ny firenena misy ny mpangataka dia mifototra amin'ny fitsipiky ny famerenana.
1. Ny mpangataka dia mandefa ny fangatahana sy ny antontan-taratasy takiana amin'ny alàlan'ny fanaterana tanana na amin'ny Internet ary mandoa sarany.
2. Ny CNIPA dia mandray ny fangatahana ary manao fanadinana savaranonando (ny fangatahana forona dia mila fanadinana lehibe).